I-china ibhegi yephepha kunye nengxowa yokupakisha yefektri kunye nabenzi | Hong Bang
Njengoko abantu behlawula ngakumbi nangakumbi kukhuselo lokusingqongileyo, izinto zokupakisha ezinobuntu ziyaveliswa. Ukupakishwa kwezinto ezinokuboliswa ziintsholongwane ikakhulu kuxhomekeke ekupakisheni okwenziwe ngezinto ezinje ngephepha, i-poly lactic acid, kunye nezinto ezisekwe kwi-bio ezinokubola zizinto zendalo. Ngokwesiqhelo, isikhwama sokuma sisebenzisa ikakhulu ukutya okulula, iti okanye ikofu.
Indawo yengxowa yephepha
Isixhobo: Iphepha leBrown eKraft, iPhepha eliMhlophe leKraft, iBhodi eDuplex, iPhepha elithile, okanye iPhepha lesiqhelo
Umbala: CMYK / Umbala wePantone
Ubukhulu: ngentando ngokusekelwe kwizicelo zakho
Ubukhulu: 50; I-80 gsm
Indlela Yoshicilelo: Gravure Printing / Offset Printing
Iphepha le-Kraft Yima i-Pouch yakhiwe yenziwa ngezinto ezininzi ezinokuthi zihlelwe ngokwamaqela ama-3 aphambili, ahlanganisanayo ukubonelela ngengxowa enezinto ezizinzileyo nezinganyangekiyo. La maqela ma-3 a:
I-Kraft Paper Yimani yakutya ikwavumela izinto ezinokwenziwa ngokwezifiso ezinje ngee-zipper, imingxunya ephezulu, iinyembezi kunye neewindows ukuphucula ukusebenza kwazo
Egqithileyo Ikholamu yomoya
Okulandelayo: Iphepha elimhlophe lephepha lesingxobo esisezantsi esisezantsi
Flat Ezantsi eKraft Iphepha leNgxowa
Indawo yokuhombisa iphepha ngefestile
Iingxowa zePhepha lePhepha
Icala leGusset Rice Paper Bag